Paula Ramos. Ajụjụ ọnụ onye edemede akwụkwọ ntuziaka maka Red Days | Akwụkwọ akụkọ
Paula Ramos. Ajụjụ ọnụ onye ode akwụkwọ ntuziaka maka Red Days
Foto: Paula Ramos webụsaịtị, nke @jeosmphoto.
Onye edemede Madrid Paula Ramos ewepụtala akwụkwọ ọhụrụ nke afọ a na-agwụcha. Aha, Akwụkwọ ntuziaka maka ụbọchị uhie. Na nke a Ajụjụ ọnụ Ọ gwara anyị banyere ya na ọtụtụ isiokwu ndị ọzọ. Ana m ekele gị nke ukwuu maka oge na obiọma ị nyere m.
Paula Ramos kwuru
Gụsịrị akwụkwọ na Ọma nka na imewe, na-achịkwa ijikọta agụụ abụọ a na akwụkwọ. O weputara onwe ya akụkọ mbụ ya, Okporo ụzọ, na 2013, na kemgbe ahụ ọ nọgidere na-ede. Emeela akwụkwọ akụkọ ntorobịa nke ihunanya na bayoloji nke April (Binyere aka, Eprel y Akwụkwọ ozi maka Eprel) na kwa kediegwu con Ala-eze anọ ahụ y Ala ndị echefuru echefu. Na Ụmụ nwanyị pinkies, nlegharị anya na isi na akụkọ ihe mere eme nke Grease, na-ewere ụdị ntorobịa na ịhụnanya. N'oge gara aga Akwụkwọ ngosi Madrid Ahụrụ m na ọ bụ otu n'ime ya ndị ode akwụkwọ kacha ewu ewu na ọtụtụ ndị na-eso ụzọ gbakọtara na mbinye aka ha.
AKWỤKWỌ NDỊ AKWỤKWỌ NDỊ DỊ MMADỤ: Aha akwụkwọ akụkọ ọhụrụ gị bụ Akwụkwọ ntuziaka maka ụbọchị uhie. Kedu ihe ị na -agwa anyị gbasara ya ebee ka echiche si malite?
PAULA RAMOS: N'ime Akwụkwọ ntuziaka maka ụbọchị uhie ị ga-ezute Elsa, ihe iri atọ na-adịghị na-agabiga ọrụ ya kacha mma ma ọ bụ oge onwe ya. Echiche ahụ sitere n'ịchọ ikwu nke ahụ oge n'ime ndụ onye ọ bụla nke ị na-eche na ị na-emezughị atụmanya nke i tinyere na ndu.
N'akwụkwọ mbụ a, n'ihi na ọ bụ a ihe omumaAnyị ga-ezute Elsa karịsịa, bụ́ onye n’oge ezumike ekeresimesi ya kpebiri ịlaghachi n’obodo o tolitere ka ya na ezinụlọ ya nọrọ ezumike, n’agbanyeghịkwa na ọ na-atụ anya inwe ezumike dị jụụ, ọ bụ nnọọ ihe dị iche. Ọchị ekwenyere ekwe nkwa, akụkọ ịhụnanya na-adọrọ adọrọ na nnukwu otu ndị enyi.
PR: Reading Agụrụ m ndụ m niile, ọbụlagodi mgbe m na-amaghị, ezinụlọ m akọwara m na m weere akụkọ ndị ahụ na-akọ akụkọ ndị ahụ, na-eme ka hà na-agụ ha. Nke mbụ m dere, mgbe m dị afọ iri na abụọ, bụ nke Cassandra, nwa agbọghọ akụkọ ya òkè ọtụtụ myirịta ya na Harry Potter, LOL.
AL: Ònye bụ onye edemede ahụ? Ị nwere ike ịhọrọ ihe karịrị otu na oge niile.
PR: Jennifer L. Armentrout Ọ naghị ada ada, ihe ọhụrụ na-apụta, ebe ahụ ka m nọ na pọtụfoliyo m, mana enwere m mmasị na ọtụtụ ndị edemede, Laura Gallego, JK Egwuregwu, Ken mpempe akwụkwọ, Michael Ende… Ndepụta ahụ enweghị njedebe.
PR: N’enweghị mgbagha Harry Potter.
PR: Ị nọ na mpaghara ederede m, naanị, na akwụkwọ ndetu m, nke m egwu, na ikwe ka m na-asọpụta.
PR: Oge kacha amasị m bụ n'ụbọchị ndị ahụ mgbe ihe niile na-aga nke ukwuu, mana na ide ihe ị ga-arụ ọrụ kwa ụbọchị.
PR: Ụdị ọkacha mmasị m bụ echiche efu, nke m dekwara, ma Agụrụ m ihe niile: uwe ojii, ihunanya, akụkọ ihe mere eme ...
PR: Ọgụgụ Ebube na iwe nke Jennifer L Armentrout, na ide, nke atọ nke trilogy: Ndụmọdụ maka ụbọchị na-acha anụnụ anụnụ.
PR: Ee, ọ dị m ka ọ dị m dị ndụ karịa mgbe ọ bụla. Juputara na akụkọ, nke ndị edemede ọhụrụ, ọ bụ ụwa na-eto eto na nchọpụta mgbe niile. Agbalịrị m ibipụta ka e wee gụọ akụkọ m, n'ikpeazụ ọ bụ ụzọ ị ga-esi nwee ike ịbịaru ndị na-agụ gị nso ka ha bipụta ya n'ụzọ omenala.
PR: Echere m na ị ga-emerịrị ya nweta ihe ndị dị mma nke ihe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Paula Ramos. Ajụjụ ọnụ onye ode akwụkwọ ntuziaka maka Red Days
Julio Cortázar: abụ